Fikradaha naqshadaynta ee 24 Comptta ee ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
Fikradda naqshadaynta sharafeed ee 24 Compact Best ragga iyo dumarka
Tattoo Compart waa tattoo aad u jecel oo jirey sanado badan oo hadda ah. Calaamadda bada waxaa loo adeegsaday badmaaxayaal badan sanado sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in ay ka caawineyso inay ku noolaadaan biyaha buuqsan oo hubiya in ay u socdaan si ammaan ah.
Macnaha Tattoo Compart
Mid ka mid ah sababaha dadka # tagaan tattoo waa sababta oo ah waxa ay u taagan tahay. Tattoo-feerka ayaa leh macno kala duwan, laakiin kuwa biyaha ku jira, waa wax qiimo leh. Waxay ka dhigan tahay calaamad nasiib wacan, ilaalin iyo taageero. Tattoo wuxuu ku yimaadaa kala duwanaansho iyo qaabab kala duwan. Waxaa jira noocyo ka mid ah shaati-galada kuwaas oo leh sharraxaad badan oo ku xiran qofka xiran. Ka dib markii riyadu tahay mid ka mid ah macnaha shahaadadaada. Uma baahnid inaad meel fog u guurto si aad uga dhigto duruufahaaga nolosha dadka kale. Iyada oo taatarkan, way kuu fududaaneysaa inaad dunida u sheegto sheekada adiga oo aan cod samaynin.
Sawirada qayb kasta oo ka mid ah jirka #tattoo geesinimo ayaa kuu sheegaysa sababta aad u aragtay tattoo markii hore. Waxay u taagan tahay hagid iyo jihada, sidoo kale calaamad nasiib wacan. Tani waa sababta keenta sawirro badan oo ku wareegsan oo lagu arki karo maraakiibta. Caannimada tattoo waa wax aad jeceshahay marka aad aragto mid ka mid ah. Maalmahan, ma aha ragga raba in ay isticmaalaan laakiin sidoo kale gabdhaha doonaya in ay eegaan moodada.
Ilaalintu waa mid ka mid ah sababaha ay dadku u isticmaalayaan isaga iyo badmaaxayaasha, waxay u arkaan inay tahay calaamad nasiib wacan. il image
Waxaan inta badan aragnaa calaamadaha ku hareeraysan ee ku jira maraakiibta qaarkood sidoo kale calaamad nasiib wacan. Sheekooyinka dadku ay ku maqan yihiin inta lagu jiro hirarka ba'an ayaa sidoo kale gacan ka gaystay tinwaynta masaafurinta si ay si buuxda uga mahad celiyaan dadka isticmaalaya. il image
Waxaa la rumeysan yahay in calaamad caynkan oo kale ah ee jirka ku jirta, waxaa jira rajo laga qabo in dadku ay noolaadaan. il image
Waxaa jira kala duwanaansho iyo noocyo kala duwan oo la yimaada tattoosyadaas. Waxaa ku wareegsan sida jilicsan ee Prizmatic, Vegvisir compass, hareeraha hareeraha, astro compass iyo xiddigaha uxusuusta si ay u magac qaar ka mid ah kuwan u socda il image
Taas macnaheedu waxa weeye in aadan noqon karin badmaaxe si aad u isticmaasho tattoo. Kuwa ugu caansan ee hareerahaan waa hirarka xiddig ee loo isticmaalo in lagu tilmaamo North Star. il image
Waqooyiga Star ayaa la isticmaalay kahor tiknoolijiyada iyo khariidadaha ayaa ka soo baxday si ay dadka uga caawiyaan helitaanka tilmaamahooda. il image
Tattoo-ga xiddiggu wuxu u taagan yahay jihada, hagid iyo hab lagu badbaadiyo guriga. il image
Waqtiga iyo masaafada ayaa had iyo jeer isku xiran. Mid ka mid ah habka ugu fudud ee loo sameyn karo tan waa in lagu daro saacadaha saacadaha ama saacada ah # qaabka loo yaqaan 'compass'. il image
Dhulka iyo khariidaduhu waxay sidoo kale kaalin weyn ka ciyaaraan sida kuxirsan ee had iyo jeer ka caawiya dadka inay helaan jihada saxda ah. il image
Tilmaamayaasha is-qarinta waxaa kaloo loo isticmaalaa inay metelaan riyooyinka dadka. Iyada oo tattoo tayo leh, waxaa laguu xaqiijinayaa in riyooyinkaaga noloshiisa aan la jebin doonin. il image
Fikradaha ku jira Tattoo Beautiful Compass
Nidaamka ayaa kaa caawin doona inaad diirada saarto noloshaada. Ma aha qasab in aad ka tagto heesahaaga adigoon la ciyaarin. il image
Waxaad ku dari kartaa astaamo kala duwan haddii aad rabto. Waxaad tahay qofka runtii ogyahay waxa aad doonayso inaad hesho maalinta dhamaadka.
Haddii aad haysato tattooist wanaagsan, waad nasaneysaa sababtoo ah isaga ama iyada ayaa ku siinaya naqshad kaas oo maskaxdaada ku dhufanaya. Xakameynta waxaa la gelin karaa qeyb kasta oo kamid ah jirkaaga. il image
Waad ku mahadsantihiin kala duwanaanta kala duwan ee hal-abuurka ee tattooists aduunka oo dhan. Ma arki kartid tattoo jilicsan oo aan eegin labaad. il image
Ma jirto nooc ka mid ah jidka loo yaqaan "compass" aanu nagu caawin karno inaan wadno. Tani waa sababta ay dadku hadda u isticmaali lahaayeen tattoos isku mid ah sidan oo kale. il image
Calaamadeynta tattoo ee iskuulka ayaa lagu qori karaa qeyb kasta oo ka mid ah jirka. Mararka qaarkood, waxaan ku aragnaa tattoos isbeddel ah oo aan caadi ahayn. il image
Tartoo jilicsan ayaa la sheegi karaa inuu yahay Astaanta Wadada North Star taas oo noqotey saxiixa farabadan. il image
Qof kastaa wuxuu isticmaali karaa tattoo this sababta oo ah wuxuu muujinayaa ama calaamad u tahay feejignaanta ama jihada. Kuwa ku fikiraya mashaariicda si ay u bilaabaan ama kuwa ku guulaystay xaalad gaar ah, waxay isticmaali karaan tattoo this si ay u xasuusiyaan mustaqbalka ama wixii la soo dhaafay. il image
Maxaad ka dhihi kartaa tattoo this? Naqshadeynta waa qurux badan gaar ahaan qashinka aboorka. il image
Ruggu wuxuu u ekaan karaa jinsi dumar haddii ay ku dhici karaan tattoo this. Waxaa jira naqshado kala duwan oo aad sameyn kartid marka aad sawirto tattoo jilicsan oo ku saabsan waxyaabahaaga. il image
Ma jiraan wax la yaab leh oo ah nooca kulaylka oo muujin kara farriin xooggan oo adiga kuu ah gabadha. Miisaanku wuxuu u socon karaa si dhan si loo hubiyo in bawdadaadu ku hadlaan farriin fara badan. il image
Mudanayaalku way jeclaan doonaan sidaan oo kale, laakiin taatuumeeynta taatuusha. Waxyaabo badan ayaa loo arkaa in ay kaamilaan si ay u caawiyaan qofka xiran inuu ballan qaado oo uu aamino wax badan. il image
Dhabarka waxaa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo sawirada dhabta ah ee dhabarka dhabarka. Dhabarku waa hal meel oo weyn oo tattoo laga dhigi karo mid aad u weyn oo cabsigelin leh sababtoo ah naqshado qurux badan. il image
Ma aha oo keliya gabdhihii taageera ee tattoo jilicsan. Dabcan, waxaan ognahay in ragga ay yihiin kuwa qaadi kara qosolka marka ay timaado sida shaatigaha sidan oo kale ah. il image
Halkan riix halkan si aad u heshid farsamooyin tafaasiil ah
garaacista gacmahajimicsiga bisadahatattoos sleevetattoos taajkiitattoo dheemanlibto libaaxsawirada gabdhahatattoos iskutallaabtatattoo ah octopustattoos cagtatattoos qoortatattoos moontattoos saaxiib saxa ahgadaal u laaboTattoo Feathertattoo indhahatattooslaabto laabtawaxay jecel yihiin tattoossawir gacmeedTilmaamta jaalaha ahJoomatari TattoosDhaqdhaqaaqatattoos ubaxnaqshadeynta mehndikoi kalluunkahenna tattootattoo biyo ahsawirrada raggatattoo maroodigatattoos gacantamuusikada muusikadaku dhaji tattoostattoos qabaa'ilkataraagada kubbaddaarrow Tattootattoos qosol lehlammaanahashaatiinka shiidantattoo tilmaanTartoo ubax badanTattoos Wadnahatattoos eagleTattoo infinitytattoos qorraxdacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahsawirada malaa'igtawaxaa la dhajiyay tattoosfikradaha tattooshimbir shimbir